कान्तिमा इमर्जेन्सीबाटै ओपिडी, आकस्मिक सेवा सुस्त, गम्भीर बिरामी पनि लाइनमा – Health Post Nepal
कान्तिमा इमर्जेन्सीबाटै ओपिडी, आकस्मिक सेवा सुस्त, गम्भीर बिरामी पनि लाइनमा
२०७५ कार्तिक १५ गते १०:२९
एक वर्षमा २ लाख ३० हजारलाई सेवा, पछिल्लो ५ महिनामा आमूल सुधार, ‘रेफर’को बाध्यता हट्दै
महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालले अपराह्न १ बजेपछि इमर्जेन्सी वार्डबाटै ओपिडी सेवा दिने गरेको छ । ओपिडी सेवा बन्द भएपछि अस्पतालले इमर्जेन्सीबाटै सबैखाले बिरामीलाई दिने गरेको अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राई बताउँछन् ।
‘अस्पतालको इमर्जेन्सी सेवा नै ओपिडीजस्तो छ । ओपिडी समय सकिएपछि रुघाखोकीका सामान्य बिरामीदेखि जोखिमयुक्त रोगका बिरामीको समेत जाँच इमर्जेन्सी वार्डमा हुने गरेको छ,’ इमर्जेन्सी केसका बिरामीले पनि पालो कुरेर लाइनमा बस्नुपर्दा समयमा उपचार नपाएको सेवाग्राहीको गुनासोप्रति डा. राई भन्छन्, ‘हामी कुनै पनि समय जाँचका लागि आएका बिरामीलाई फर्काउँदैनौँ र हामीकहाँ अन्यत्र जस्तो कोटा सिस्टम छैन । सामान्यदेखि जटिलखाले सबै आएजति बिरामीलाई लिने भएकाले इमर्जेन्सीमा लाइन हुनु स्वाभाविकै हो ।’ उनका अनुसार कान्तिमा आउने कुल बिरामीको ४० प्रतिशत इमर्जेन्सीबाट र ६० प्रतिशत ओपिडीबाट आउने गरेका छन् ।
कान्तिको इमर्जेन्सीमा लाइन बस्नुपर्ने गुनासो सेवाग्राहीको छ । सिरियस बिरामीले पनि लाइनमा बस्नुपरेको विषयलाई लिएर अस्पताल र सेवाग्राहीबीच समय–समयमा असमझदारी बढेका घटना बाहिरिने गरेका छन् । केही समयअघि मात्र इमर्जेन्सीमा ल्याइएको सिरियस बिरामीलाई लाइनमा राखेको विषयलाई लिएर बिरामीका आफन्तले चिकित्सकमाथि हातपात गरेको घटनाले चर्चा पाएको थियो ।
‘इमर्जेन्सीमा एकजना डाक्टर नियमित उपस्थित हुन्छ, थप आवश्यक परेमा उसैले खबर गर्छ । खबर गरेलगत्तै आवश्यक मात्रामा डाक्टर तथा नर्स उपलब्ध हुन्छन् ।’
इमर्जेन्सीमा नियमित यति नै डाक्टर रहनुपर्ने भनी निश्चित कोटा निर्धारण गरिएको छैन । कम्तीमा एकजना अनिवार्य उपस्थित हुने र आवश्यकताअनुसार अन्य वार्डबाट जतिसुकै वेला थप डाक्टर उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको निर्देशक राई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘इमर्जेन्सीमा एकजना डाक्टर नियमित उपस्थित हुन्छ, थप आवश्यक परेमा उसैले खबर गर्छ । खबर गरेलगत्तै आवश्यक मात्रामा डाक्टर तथा नर्स उपलब्ध हुन्छन् ।’
अस्पतालमा चैत–वैशाख महिनादेखि इमर्जेन्सीमा बिरामीको चाप बढ्ने गरेको इमर्जेन्सी वार्डकी नर्सिङ इन्चार्ज अन्नपूर्ण मल्ल बताउँछिन् । उनका अनुसार इमर्जेन्सीमा दैनिक ८० देखि ९० को संख्यामा बिरामी आउने गरेका छन् । इमर्जेन्सीकक्षमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या नबढेको तर पछिल्लो एक–डेढ वर्षमा बिरामीको चाप भने बढ्दै गएको मल्लको अनुभव छ ।
उनका अनुसार इमर्जेन्सी वार्डमा हाल ९ जना नर्स र एकजना मात्र डाक्टर कार्यरत छन् । २४ घण्टामा औसत ९० बिरामीका लागि एकजना मात्र डाक्टर अपर्याप्त रहेकाले लाइन बस्नुपरेको उनको बुझाइ छ । ‘ओपिडीका कतिपय बिरामी ओपिडी बन्द भएपछि इमर्जेन्सीमा आउँछन् । एकजना डाक्टरले इमर्जेन्सी र ओपिडी दुवैको भार थेग्न नसकेकाले इमर्जेन्सीमा लाइन बस्नुपरेको हो,’ उनी भन्छिन् । १ बजेसम्म ओपिडी खुला रहने हुँदा इमर्जेन्सीमा लाइन हुँदैन । कतिपयलाई ओपिडी बन्द भएको ज्ञान नहुने तथा थाहा हुनेहरू पनि कान्तिमा इमर्जेन्सीमा सेवा लिन पाइन्छ भन्दै आउने भएकाले पनि समस्या हुने गरेको छ ।
अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा १३ वटा बेड रहेको र बिरामीको चाप बढेको समयमा एउटै बेडमा ४–५ जनासम्म बिरामी सुताउनुपर्ने अवस्थासमेत आउने गरेको इन्चार्ज मल्ल बताउँछिन् ।
दसैँ–तिहारको समयमा सामान्यतया बिरामीको चाप कम हुने समयमा पनि कान्तिमा दैनिक औसत ६० जना बिरामी आउने गरेको उनी बताउँछिन् । यो संख्या रजिस्टर गरिएका बिरामीको हो । सबै बिरामीको रजिस्टर गरिएको हुँदैन । रिप लगाउनुपर्ने तथा इन्जेक्सन लगाउनुपर्ने बिरामीको मात्रै रजिस्टार गर्ने गरिन्छ ।
अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा १३ वटा बेड रहेको र बिरामीको चाप बढेको समयमा एउटै बेडमा ४–५ जनासम्म बिरामी सुताउनुपर्ने अवस्थासमेत आउने गरेको इन्चार्ज मल्ल बताउँछिन् । सरकारी अस्पतालमा त्यो पनि इमर्जेन्सीमा आएका बिरामीलाई बेड संख्या अपर्याप्त भए पनि लिनुपर्ने हुन्छ । अत्यन्तै जोखिम केस तथा आइसियूमा राख्नुपर्ने केस भएमा त्यस्तालाई माथि (सम्बन्धित वार्डमा) रेफर गरिने मल्ल बताउँछिन् ।
इमर्जेन्सीमा एक सिफ्टमा ३ जना नर्स कार्यरत हुन्छन् । बिरामीको चाप बढेको समयका लागि यो संख्या अत्यन्तै कम रहेको उनको भनाइ छ । बिरामीको राम्रो हेरचाह र गुणस्तरीय सेवाका लागि साधन–स्रोतसँगै जनशक्तिसमेत बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ । कान्तिमा बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उपलब्ध ओपिडी सेवाका लागि भने दैनिक सयदेखि १ सय ५० को हाराहारीमा बिरामी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।
Tags: कान्ति बाल अस्पताल